Hlola i-Egypt - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze eGibhithe
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseGibhithe
Bukela ividiyo ngeGibhithe
Ngokusemthethweni, i-Arab Republic of Egypt iyizwe elidlula ezweni eNyakatho Afrika kanye ne-Middle East enhlokodolobha lakhona elisedolobheni elikhulukazi, Cairo. IGibhithe liphinde lidlulele e-Asiya ngokubamba iNhlonhlo yeSinayi.
Uma uqala ukuhlola iGibhithe uzothola ukuthi mhlawumbe yaziwa kangcono njengekhaya lempucuko yasendulo yaseGibhithe, ngamathempeli alo, ama-hieroglyphs, ama-mummies, futhi - abonakala ngaphezu kwakho konke - amaphiramidi ayo. Okungaziwa kakhulu ngamagugu enkathi ephakathi yaseGibhithe, inhlonipho kaChristian Coptic kanye ne-Islam - amasonto asendulo, izindela zezindela nezama-mosque zenza izwe laseGibhithe libonakale. I-Gibhitheya ivusa umcabango wezivakashi zasentshonalanga njengakwamanye amazwe futhi cishe ngenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi emhlabeni wonke.
Ukuvama nokunotha kwesikhukhula soMfula iNayile waminyaka yonke, kuhlanganiswa nokuhlukaniswa kodwa okulethwa wugwadule ukuya empumalanga nasentshonalanga, kwavunyelwa ukuthuthuka kwenye yezimpucuko ezinkulu zomhlaba. Kwavela umbuso onobunye ezungeze i-3200 BC kwathi uhide lwamakhosi wabusa eGibhithe eminyakeni eyinkulungwane eyalandela. Umbuso wokugcina wendabuko wehlela kumaPheresiya e341 BC, wona athathelwa indawo amaGreek, amaRoma, kanye neByzantines.
Ngokuvamile, ihlobo liyashisa futhi lomile kanti ubusika busezingeni eliphakathi nendawo. NgoNovemba kuya ku-Mashi ngokuqinisekile ziyizinyanga ezihamba kahle kunazo zonke zokuhamba eGibhithe. Cishe akukho mvula esigodini saseNayile, ngakho-ke awudingi giya lesimo sezulu esimanzi!
Amabhange, izitolo namabhizinisi asondele kula maholide alandelayo e-Egypt (ama-civil, world), kanye nezithuthi zomphakathi angaqhuba izinsizakalo ezikhawulelwe kuphela:
I-7 Januwari (Christmas Christmas)
I-25 Januwari (Usuku lokuvukelwa lwaseGibhithe)
I-25 Ephreli (uSuku lwenkululeko lwaseSinayi)
I-1 Meyi (Usuku Lwabasebenzi)
I-23 Julayi (Usuku Lwezinguquko)
I-6 Okthoba (Usuku Lwezempi)
I-1st Shawwal, inyanga ye-10th Hijri (i-Eid Elfitr)
I-10th Tho-Elhejjah, inyanga ye-12th Hijri (i-Eid Al-adha)
Izinsuku ze-29 noma i-30 zeRamadan
URamadan uphela ngomkhosi we-Eid ul-Fitr oqhubeka ezinsukwini ezimbalwa.
IRamadan iyinyanga yesishiyagalolunye yekhalenda lamaSulumani futhi iyinyanga ebaluleke kunazo zonke kuKhalenda lamaSulumane lamaSulumane, inkolo iningi eGibhithe. Kukhunjulwa isikhathi lapho uNkulunkulu embula khona iQur'an kuMohammed, phakathi nale nyanga engcwele, amaSulumane ayakugwema ukudla, ukuphuza noma ukubhema kuze kube sekushoneni kwelanga ngosuku. Yize ukunamathela ngokuqinile kwiRamadan kungokwamaSulumane kuphela, amanye amaSulumane ayakwazisa ukuthi okungewona amaSulumane awadli ukudla noma ukubhema ezindaweni zomphakathi. Ngesikhathi seRamadan, izindawo zokudlela eziningi kanye namakhekhe ngeke kuvulwe kuze kube sekushoneni kwelanga. Izinto zokuhamba zomphakathi azivamisile, izitolo eziseduze ngaphambi kokushona kwelanga futhi ijubane lempilo (ikakhulukazi ibhizinisi) ngokuvamile lihamba kancane.
Njengoba bekulindelekile, impela ekushoneni kwelanga, izwe lonke liyakhala lize limatasatasa ngesidlo esikhulu sosuku (iftar noma break-Fast) esivame ukwenziwa njengemicimbi yomphakathi emaqenjini amakhulu abangane. Abantu abaningi abacebile emigwaqweni yaseCairo bapheka ukudla okugcwele mahhala kubantu abadlulayo, abampofu noma abasebenzi abangakwazi ukushiya amakhefu abo ngaleso sikhathi. Imikhuleko iba yimicimbi edumile 'yezenhlalo' abanye bathande ukuyicebisa ngokuphathwa kokudla okukhethekile ngaphambi nangemva kwalokho. Ihora noma amabili kamuva, ukuhluma okumangalisayo kwamadolobha kwenzeka. Imigwaqo kwesinye isikhathi ihlotshiswe ngokucebile inyanga yonke inamahora wokujaha okuqhubekayo kuze kube sekuseni kakhulu. Ezinye izitolo nezindawo zokudlela ezinhle zekhofi zenza inzuzo enkulu kakhulu yenzuzo yazo yonyaka ngalesi sikhathi sonyaka. Izindleko zokukhangiswa kuthelevishini nasemsakazweni zonyuka ngalesi sikhathi kanye nokuzijabulisa kusencotsheni yazo.
Amadolobha nezindawo angavakashela eGibhithe
I-Gibhithe inezikhumulo zezindiza eziningana zomhlaba wonke:
Cairo I-International Airport - iphoyinti lokungena eliyinhloko kanye nehabhu lesiphathi sezwe senethiwekhi i-Egyptptair.
Luxor I-International Airport - manje ethola inani elikhulayo lezindiza zomhlaba wonke ezihlelelwe, ikakhulukazi zivela e-Europe, ngaphezu kwezindiza ezithwala abantu.
Aswan Isikhumulo sezindiza
I-Hurghada International Airport - ithola izindiza eziningi ezihlangene
ISharm El-Sheikh International Airport - ithola izindiza eziningi.
Isikhumulo sezindiza i-Burg Al-Arab International Airport
Isikhumulo sezindiza saseMarsa Alam International
Kuze kube muva nje bekungakaze kuzwakale ngokuqasha imoto nokuzishayela eGibhithe. Kodwa-ke manje ungakwazi ukuqasha imoto. Noma kubiza kakhulu, ungayiqasha iDacia (Renault) Logan esesimweni esihle futhi uzulazule ngokukhululeka usuka ogwini uye esifundeni iNayile. Imigwaqo isesimweni esihle impela, kepha ezinye izelamani zinamaqhubu futhi imigodi ihlala ijwayelekile.
Kwezinye izingxenye iziteshi zegesi cishe azikho, ngakho gcwalisa ngaphambi kokuya ogwadule. Imigwaqo yasehlane eseMpumalanga kusuka Luxor kuya Aswan, futhi ukusuka e-Aswan kuya e-Abu Simbel kulungile futhi kuyashesha, kuqhathaniswa nokushayela uNayile ngakho konke ukuthobelana.
Ulimi olusemthethweni lwaseGibhithe yi-Standard Arabic.
Izimali zakwamanye amazwe zingashintshwa emahhovisi okushintshana noma emabhange, ngakho-ke asikho isidingo sokuguqukela kubashintshi bemali yasemgwaqweni dodgy. Amahhotela amaningi wokugcina aphezulu ngentengo yamadola noma ama-euro futhi uzowemukela ngentokozo njengokukhokha, imvamisa ngesilinganiso se-premium ngaphezulu kwamaphawundi waseGibhithe. Ama-ATM ajwayelekile emadolobheni futhi mhlawumbe inketho engcono kakhulu; zivame ukunikela ngesilinganiso esihle kakhulu futhi amabhange amaningi aphesheya anamagatsha eGibhithe .. Amahora ebhange angeSonto kuze kube uLwesine, 08: 30-14: 00.
I-American Express, i-Diners Club, i-MasterCard ne-Visa zamukelwa, kepha amahhotela amakhulu noma zokudlela kuphela ezinkulu Cairo nezindawo zokudlela ezindaweni zabavakashi zizokwamukela kalula amakhadi wesikweletu njengokukhokha ..
Abantu abaningi abasebenza embonini yesevisi / yokungenisa izihambi bazama ukwenza umthombo wabo ophambili weholo ngokuphila ngezeluleko.
Khumbula ukuthi abantu laba bavame ukuhlala impilo enzima, imvamisa banomthwalo wokondla imindeni enkulu futhi kungenzeka nje benze lokho ngoba imali abayitholayo emsebenzini ayanele ukuba baphile impilo elula.
I-Gibhithe liyipharadesi labathengi, ikakhulukazi uma unentshisekelo ngezi zikhumbuzo namakhisitshi aseGibhithe. Kodwa-ke, kukhona futhi inani lezimpahla ezisezingeni eliphakeme ezithengiswayo, kaningi ngamanani entengo. Okunye ukuthenga okuthandwa kakhulu kufaka phakathi:
Ama-antique (NB: hhayi amadala, ukuhweba ngawo okungekho emthethweni eGibhithe)
Amakhaphethi kanye nama-rugs
Izimpahla nezingubo zikaCotton zingathengwa kuKhan El Khalili. Izambatho zikotini ezisezingeni eliphakeme zaseGibhithe zingathengwa ngamaketanga ahlukahlukene.
Izimpahla ezimboziwe, njengamabhodi we-backgammon
Ama-Cartouches obucwebe enza isikhumbuzo esihle. Lawa amapuleti wensimbi abunjiwe njenge-oval elongated futhi anemidwebo wegama lakho kuma-hieroglyphs
Amakha angathengwa cishe kuzo zonke izitolo eziyisikhumbuzo. Qinisekisa ukuthi ucela umthengisi ukuthi akufakazele ukuthi abukho utshwala obuhlanganiswe namafutha.
Amapayipi amanzi (Sheeshas)
Izinongo - zingathengwa ezitolo ezinemibala ezimakethe eziningi zaseGibhithe. Amakhambi omisiwe nezinongo ngokuvamile zekhwalithi ephakeme kunaleyo etholakala ezitolo ezinkulu zaseNtshonalanga futhi afinyelela ku-4 noma izikhathi ze-5 eshibhile, noma kunjalo intengo yokugcina izoncika kwezokuthengisela kanye nezimo zasendaweni.
Lapho uthenga ezimakethe noma usebenzelana nabathengisi basemgwaqweni, khumbula ukuguquguquka. Uzothola abanikazi bezitolo bevulekile kakhulu ekuxhunyanisweni namanani entengo aphansi kunangaphambili - ngisho nasezindaweni ezifana Luxor/Aswan futhi hhayi eCairo kuphela.
Uzothola nemikhiqizo eminingi yasentshonalanga nxazonke. Kunezitolo eziningi eGibhithe, ezivame kakhulu ukuba yiCitystars Mall, okuyisikhungo sokuzijabulisa esikhulu eMpumalanga Ephakathi nase-Afrika. Uzothola izindawo zokudlela ezisheshayo zasentshonalanga ezifana neMcdonald's, KFC, Hardees, Pizza Hut, njll. Kanye nemikhiqizo yezingubo ezifana noCalvin Klein, uLevi's, uMichael Kors, uHugo Boss, uLacoste, uTommy Hilfiger, u-Armani Exchange nokunye.
Kufanele uzame izitsha neziphuzo zalapha eGibhithe
IPickpocketing iyinkinga emadolobheni amakhulu aseGibhithe, ikakhulukazi Cairo. Kufanele ugcine imali yakho isiqeshana esikhwameni sakho njengoba kwenza abantu bendawo. Ubugebengu obunodlame buyivelakancane, futhi kungenzeka kakhulu ukuthi uzobanjiswa noma uphangiwe. Uma uzithola usisisulu sobugebengu, ungathola ukwesekwa kwabahamba ngezinyawo bendawo ngokumemeza “Harami” (Isigebengu) ngenkathi uxosha umuntu okuphange. Sekukonke, imikhonyovu iyikhathaza eyinhloko eGibhithe.
AbaseGibhithe ngokuvamile bangabantu abalondolozayo futhi abaningi bakholwa futhi bagqoka ngendlela evumayo. Yize bemukela abantu bezinye izizwe begqoke ngokweqile, kuwukuhlakanipha ukungagqoki ngendlela evusa inkanuko, uma nje uvikela ukuthi abantu bangakubheki. Kuhle ukugqoka amabhulukwe noma i-jean esikhundleni sezikabhoqo njengoba izivakashi zigqoka lezi kuphela. Kuma-nightclub anamuhla, izindawo zokudlela, amahhotela nemigoqo eCairo, Alexandria nezinye izindawo zokuvakasha uzothola ikhodi yokugqoka ingakhawuleki kangako. Imisebenzi esemthethweni noma yezenhlalo kanye nezindawo zokudlela ezihlakaniphile zihlala zidinga ukugqokwa okuhlelekile.
EGiza Pyramid nakwezinye izindawo ezinjalo phakathi nezinyanga zasehlobo ezishisayo, iziqeshana ezifushane zemikhono kanye neziqeshana ezingenamikhono zamukelekile kwabesifazane (ikakhulukazi lapho behamba neqembu lokuvakasha). Noma kufanele uphathe isikhafu noma okuthile ukumboza okuningi ngenkathi uhambela / usuka endaweni yezivakashi.
Abesifazane kufanele bamboze izingalo nemilenze uma behamba bodwa, futhi ukumboza izinwele zakho kungasiza ukugcina ukunakwa okungafuneki
I-Egypt inensizakalo yocingo yesimanje enengqondo okubandakanya abahlinzeki bezinsizakalo beselula abathathu be-GSM
Ukufinyelela i-Intanethi kulula ukukuthola futhi kushibhile. Amadolobha amaningi, anjengeCairo neLuxor, nezindawo ezimbalwa zabavakashi, njenge-Edfu, ziziqhayisa ngobuningi bamakhofi amancane e-inthanethi. Ngaphezu kwalokho, inani elandayo lezitolo zekhofi, izindawo zokudlela, izindawo zokulala zamahhotela nezinye izindawo manje zinikeza ukufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala okungenawaya. I-Wi-Fi yamahhala iyatholakala nasezitolo zekhofi zanamuhla.
Kunezindlela ezithile zokwenza izingubo zakho ehlane:
Okulula kakhulu, okusebenzayo kakhulu - hhayi okubizayo - ukuhlela ukuthi ihhotela lakho liwenzele ukugezelwa. Ngokuhlelela kwangaphambilini, izingubo ezishiyelwe embhedeni noma ezingeniswe lapho zamukelwa zizobuyiselwa kuwe kusihlwa zihlanzwe futhi zicindezelwe.
Cairo inezindwangu ezimbalwa eziyisisekelo zezitayela zaseNtshonalanga ezisezindaweni lapho kuhlala khona abokufika kanye nabavakashi - azikho ndawo kwenye indawo ezweni. Amanye amahhotela emadolobheni abavakashi afana Luxor futhi u-Dahab unikeza insizakalo yokuwasha umshini egumbini lokuphumula - imishini imvamisa ingezindaba zakudala futhi uzosala nomsebenzi wokusonga futhi usongele izingubo zakho.
Ngisho eCairo, ukomisa akuvamile, kepha akudingeki ncamashi: Ukuhlanganiswa kwesimo sezulu saseGibhithe kanye nohlu lwezingubo kuzowenza umsebenzi. Musa ukulenga ngaphandle kwezindwangu ezimhlophe ngaphandle, uthuli luzowenza aphuzi.
IThebes yasendulo neNecropolis yayo
IMemphis neNecropolis yayo - Izinkundla Zamaphiramidi kusuka eGiza kuya eDahshur
Izikhumbuzo ZaseNubian kusuka ku-Abu Simbel ziya kuPhilae
Indawo ye-Saint Catherine